Tusaale ahaan, waxaan isku dayaa inaan tan ku sameeyo maalin kasta barta. Markii aan ogaado inay yihiin kuwo badan oo Facebook jecel laakiin aan badnayn Twitter-ka, dib ayaan ugu riixi doonaa halkaas. Haddii aan ku arko tan oo jawaab celin ah Twitter iyo Facebook, waxaan ku riixi doonaa StumbleUpon. Markii aan arko mawduuca oo si weyn u koraya, wax badan ayaan ka qori doonaa mowduucaas, laga yaabee inaan jadwaliyo a Suuq-geynta Tech Radio ka muuji, ama xitaa qorshee fiidiyow.
Mid ka mid ah xeeladaha aan arkay runtii ka shaqeynta baloogga ayaa lagu daray noocyo kala duwan suuq-geynta suuq-geynta. Boggu wuxuu ku koray inta udhaxeysa 10% iyo 15% labadii bilood ee la soo dhaafay iyada oo leh muuqaal dheeri ah. Natiijo ahaan, waxaan helnay ogeysiis iyaga loo sameeyay oo waxaan hadda ku hawlan nahay naqshadeeyayaasha garaafka si aan u horumarinno midkeenna. Midkii ugu dambeeyay ee sida moobilku u saameyn ku yeelanayo ganacsiga waxay ahayd fikrad aan qabay kadib markaan aqriyay warqad cad… marka xitaa uma baahnin inaan sameyno baaritaanka!
Hawl-wadeenadu waxay fure u tahay suuq-geyn badan oo is-dhaafsi ah, sidaa darteed muddada aad sii dheereyn karto istiraatiijiyad caan ah, ayaa ka sii wanaagsan natiijooyinka guud ee ololayaashaada. Kaliya kuma aragno tan khadka tooska ah, waxaan sidoo kale u aragnaa qadka-khadka sidoo kale. Haddii ganacsi uu la mid noqdo dhagaystayaasha… like Flo, Marwada Horusocodka ah, waxaan aragnaa xayeysiis taxane ah oo ay la socoto Marwada Horusocodka.
Maaha kaliya suuqgeynta, sidoo kale. Waa xaqiiqo nolosha ka mid ah oo aan u baahanahay inaan xumaanta iska goyno oo wanaaga ku dheereyno. Waxaan u baahanahay inaan iska jaro dhaqankeyga cunida oo aan barto sida jimicsiga aan u dheereeyo. Shaqada, waxaan ubaahanahay inaan jaro macaamiisha aan na dhageysaneyn ama aan natiijo helin, oo aan aad uga shaqeeyo sidii loo dheereyn lahaa xiriirka aan la leeyahay shirkadaha dhageysta ee guuleysta.
Shirkado badan ayaa si fiican u yaqaan oo ku qanacsan dadaallada suuq-geynta qaarkood si fudud uma jaraan… xitaa markay fashilmaan Waxaan u maleynayaa inay tahay farsamo dabiici ah suuqleyda kuwaas oo noqda kuwo aad ugu qanacsan waxyaabaha dhexdhexaadka ah. Maskaxdooda si fudud ayey ugu xiran yihiin waxyaabo kale. Suuqgeeyayaasha emailka waxay ku tiirsan yihiin emaylka, kuwa wax raadiya waxay ku tiirsan yihiin raadinta, suuqgeeyayaasha xayeysiinta ee mushaharka bixiya waxay ku tiirsan yihiin xayeysiinta… waa goob goos goos ah oo si lama huraan ah ugu dambaynaysa ololeyaal fashilmay iyo dakhli badan oo lumay.
Taas bedelkeeda, suuqleyda badankood dhag uma dhigin Analytics oo xitaa ma ogaan kartid waxa shaqeynaya ama aan shaqeynin. Kama dheereeyaan midkoodna dadaallada kanaalka oo dhan. Olole kastaa wuxuu ka bilaabmaa meel hoose oo aan daryeel laga helin adduunka. Tani waxay ka dhigaysaa iyaga oo aan awoodin inay ka faa'iideystaan ​​xawaaraha ay horay u dhigeen.
Asal ahaan, maalgashigaas ku socda bulshada ayaa sii dheereynaya ololahaaga soo socda… ka hor intaadan waligaa qorsheysan waa fulintiisa! Haddii aad haysato 100,000 oo raacayaal ah oo dhageysanaya oo ku siiyay ogolaansho inaad la xiriirto iyaga, sidee taasi u beddeli doontaa ololahaaga suuqgeynta ee soo socota? Waxaan rajeynayaa inay tahay wax aad ka fikirayso.